कार्यभार सम्हालेपछि जनप्रतिनिधि |
कार्यभार सम्हालेपछि जनप्रतिनिधि
के–के गरे, मेयर, उपमेयर र अध्यक्षले
प्रकाशित मिति :2017-06-15 14:13:19
-खेमा बस्नेत –
काठमाडौं । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना पुरा भएको छ । बैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारले सपथ लिई कार्यभार समेत सम्मालिसकेका छन् ।
यस विचमा धेरैजसो विजयी उम्मेदवारहरुले निर्वाचनका समयमा जनतासंग गरेका प्रतिवद्धता अनुरुप काम गर्ने पहल पनि गरिरहेको देखिन्छ । उनीहरु फेरि पनि जनताको घरदैलोमा गएर आफूले गरेका बाचाहरु पुरा गर्ने आश्वसान पनि दिइरहेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले काठमाडौंलाई धुलोरहित बनाउने अभियान अनुरुप सपथग्रहण गरेको दिनको दोस्रो दिनदेखी सुर्यदया भन्दा अगाडी काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सुचिकारहरु परिचालन गरेको बताउनुभयो । ‘काठमाडौंलाई धुलोरहित बनाउने अभियान अनुसार अहिले हामीले बिहानको फोहोर र धुलोपनि उठाउन सुचिकारलाई भनेका छौ त्यही अनुसार काम भैरहेको छ ’ उपमेयर खड्गीले भन्नुभयो ।
अहिले महानरपालिकाले गरिरहेको कामको समिक्षा र भावी दिनका लागि योजनाहरु बनाउन काम भैरहेको उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौंलाई अशोभनीय हुने खालका ठुला साइनबोर्टहरु हटाउने र निश्चित मापदण्डका साइनबोर्ड मात्र राख्न दिनका लागि छलफल भैरहेको समेत खड्गीले बताउनुभयो ।
ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर गीता सत्यालले २० वर्षपछि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधी पाएको हुँदा आफ्नो क्षेत्रको समस्याबारे स्थानीयसंग छलफलगरी अगाडी बढ्नुपर्ने भएकाले त्यसैको तयारीमा लागेको बताउनुभयो ।
‘यो अवधिमा हामीले ३ दिने अभिमुखीकरण प्रशिक्षण तालिम लियौं, महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा छुट्याएको बजेट कहाँ कति खर्च भए के कति कामहरु गर्न बाँकी छन् ? त्यसको सुपरिवेक्षण गरिरहेका छौ ’ सत्यालले भन्नुभयो ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु गुरुङले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएपछि जनताको काम छिटो छरितो गर्न कार्यालयमा जानथाल्नु भएको छ । हिंसा प्रभावित महिलाहरुका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा दिने बाचा अनुसार प्रारम्भमा सो डेक्स स्थापनाको क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । साथै यस विचमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दिएको ३ दिने अभिमुखिकरण तालिममा व्यस्त रहेको उहाँको भनाई छ ।
त्यसैगरी हेटौडा उप–महानगरपालिकाकी उपमेयर मिना लामाले आफू निर्वाचित भएको एक महिनामै हेटौडामा अधिक रुपमा भइरहेको जमिन प्लटिङ्ग कार्यलाई रोक्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । ‘निर्वाचित भएको समय नै धेरै भएको छैन, तथापी हामीले उर्वर जमिनलाई प्लटिङ्ग गर्ने कार्यलाई रोक्ने दिशातिर हामीले आफ्नो कार्य थालनी गरेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो ।
जुम्ला चन्द्रननाथ नगरपालिकाकी मेयर कान्तिका सेजुवालले आफुले गरेको बाचा अनुरुप स्मार्ट सिटि बनाउनका लागि विज्ञ, स्थानीयसंग छलफल गर्ने नियर्ण गरेको बताउनुभयो । उहाँले समन्वय र नगरपालिकाको अवस्था बारे छलफल गर्ने काम भैरेहको बताउनुभयो ।
त्यसगरी काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. १४ बाट अध्यक्ष पदमा विजयी शोभा सापकोटाले व्यक्तिगत घटना दर्तामा सक्रियता देखाउनुभएको छ । उहाँले विवाह दर्ता, नागरिकता, मृत्यु दर्ता, जन्म दर्ता जस्ता सेवालाई चुस्त बनाउन पहल थालिएको बताउनुभयो । ‘अहिले म १० बजे देखी ५ बजेसम्म जनताको काम गर्दै आएकी छु । उहाँहरुका व्यक्तिगत घटना दर्ता सिफारिस जस्ता काम गदै आएकी छु’ अध्यक्ष सापकोटाले भन्नुभयो ।
उहाँले काठमाण्डौको १४ नम्बर वडा भएर बग्ने बल्खु खोलालाई सफा गर्ने कार्यक्रमलाई समेत पहिलो प्राथामिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो । ‘भरखैरै भएको बैठकबाट हामीले बल्खु खोलालाई सरसफाई गर्ने निर्णय गरेका छौ । केही दिनमा सरसफाई कार्यक्रम गर्ने छौ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।